တူမောင်ညို – ကညွတ်ကွင်းသား၏ နောက်ဆုံး နိဂုံးလော | MoeMaKa Burmese News & Media
MoeMaKa (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်)
“မှော်ဝန်းသား ဦးခင်ညွန့်”တော့ ဖတ်ခဲ့ကြရပြီးပြီ။ များမကြာမီ “ကညွတ်ကွင်းသား ဦးရွှေမန်း” စာအုပ် ဖတ်ရတော့မယ်လို့ ထင် ရပါတယ်။ အာဏာဗဟိုချက်မ အနီးကနေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လွင့်စင်ကွာဝေးသွားခဲ့ကြပြီဆိုရင်ဖြင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေမှာ စာရေးချင်တဲ့ ခံစားချက်တွေ ဒုနဲ့ဒယ်နဲ့ ပေါ်လာတတ်တယ်ထင်ပါရဲ့။ သူတို့ရေးတာတွေထဲက လိမ်ညာတာတွေ၊ အကုန်သိအကုန်တတ် ကြွားလုံးထုတ်တွေကို သည်းခံပြီး သူတို့အတွင်းစည်းမှာ အာဏာခြေပုန်းခုတ်မှုတွေ၊ တပည့်မွေးဆရာမွေး၊ ဂိုဏ်းအုပ်စုတွေ ဘယ်လို အကောက်ကြံကြတာတွေကို သူတို့တတွေရေးတဲ့ စာအုပ်တွေထဲကနေ လေ့လာသိရှိနိုင်ပါတယ်။ စစ်အုပ်စုကို တစုံတရာအကဲခပ်နိုင်ပါ လိမ့်မယ်။ (ဗိုလ်)ဦးရွှေမန်းစာအုပ်ရေးပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။
ဗိုလ်ရွှေမန်းကို ကြံ့ဖွံ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကနေ ဖယ်ရှားလိုက်ပြီ။ ဒါဟာ ဘယ်သူမှ မျှော်လင့် တွေးထင်မထားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စကနေ အောက်ပါအချက်တွေကို သဘောပေါက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ အများထင်မြင်ယူဆ နေကြသလို “အာဏာ”ဆိုတာကို ခွဲဝေပိုင်းခြားထားတာမဟုတ်ဘူး။ ခွဲဝေပိုင်းခြားထားလို့လည်းမရဘူး။ အာဏာဆိုတာ စစ်အုပ်စု “နံပတ်ဝမ်း”လက်ထဲမှာသာရှိမြဲရှိတယ်။ “ဥပဒေပြုရေး- အုပ်ချုပ်ရေး – တရားစီရင်ရေး” ဆိုပြီး ခွဲခြားထားပါတယ်လို့ ပြောဆိုနေတဲ့ စကား ဟာလည်း ယုံတမ်းစကားသာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားသွားပါတယ်။ တဆင့်တိုးပြီး သိရှိလာရတာတော့ “နံပတ်ဝမ်း” ဟာ “စည်းကမ်း ပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်”အောက်မှာ ကာချုပ် ကိုသာမက ပါတီဥက္ကဋ္ဌကိုပါ စိတ်ကြိုက် ခန့်အပ်နိုင်တယ်၊ စိတ်ကြိုက်ဖယ်ရှားနိုင်တယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို သိရှိလာစေပါတယ်။
အခုလို (ဗိုလ်) ဦးရွှေမန်းကို ဖယ်ရှားပြလိုက်လို့ “နံပတ်ဝမ်း” ရဲ့ အာဏာဟာ (ဗိုလ်) ဦးသိန်းစိန်နောက်မှာရှိတယ်လို့ တထစ်ချ ယူဆလို့မရနိုင်ပါဘူး။ လိုအပ်မှုနဲ့အခြေအနေအပေါ်မှာတည်ပါတယ်။ အကယ်၍သာ (ဗိုလ်) ဦးသိန်းစိန်ကို ဖယ်ရှားဖို့ ၊ လက်ရှိကာချုပ်ကို ဖယ်ရှားဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်း “နံပတ်ဝမ်း” ရဲ့ အာဏာဟာ အခြားပုံစံတမျိုးမျိုးနဲ့ ဖော်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အာဏာဟာ လက်ရှိတည်ရှိနေတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွဲပြောရမယ်ဆိုရင် (ဗိုလ်) ဦးရွှေမန်း၊ (ဗိုလ်) ဦးသိန်းစိန်၊ ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်တို့ လက်ထဲမှာ တကယ်တမ်း မရှိပါဘူး။ နံပတ်ဝမ်းလက်ထဲမှာသာရှိတာပါ။ “နံပတ်ဝမ်း” ခင်းပေးထားတဲ့၊ နေရာချထားပေးထားတဲ့ အာဏာရင်ပြင်ပေါ် မှာ သူတို့တတွေ တာဝန်အရ အသုံးတော်ခံကြရင်း၊ သူတို့အချင်းချင်းအကြားမှာ ပွတ်မိတိုက်မိကြတာပါ။
“ နံပတ်ဝမ်း” နဲ့ သူတို့ အကြားမှာ အာဏာကိစ္စသွားပြီး ပွတ်တိုက်နေလို့ဘယ်လိုမှမရနိုင်ပါဘူး။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒီလို ပွတ်မိတိုက်မိသွားရင် အကဲသွားစမ်း မိရင် ငါးပါးမှောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ (ဗိုလ်) ဦးရွှေမန်းကိစ္စက သူတို့ချင်း(ဗိုလ်ရွှေမန်းနဲ့ ဗိုလ်သိန်းစိန်) ပွတ်ကြ၊ တိုက်ရာကနေ (ဗိုလ်) ဦးရွှေမန်းရဲ့ထိုးနှက်မှုဟာ (ဗိုလ်သိန်းစိန်တို့တင်မကဘဲ) အရှိန်လွန်ပြီး “နံပတ်ဝမ်း” ရဲ့ အာဏာအသားနု ကို သွားမိထိပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဟိုက မနေသာပဲ ထပြီး ဆုံးမပညာပေးလိုက်တာလို့ ယူဆပါတယ်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီတွင်းမှာ (ဗိုလ်) ဦးရွှေမန်းကို အရာချဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာ သူတို့ (ဗိုလ်သိန်းစိန်၊ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်၊ဗိုလ်ဌေးဦး) ချည်း လုပ် လို့မရပါဘူး။ “နံပတ်ဝမ်း”ရဲ့ အမိန့်နဲ့ညွန်ကြားချက်လိုပါတယ်။ (ဗိုလ်) ဦးရွှေမန်းကို အရာချဖယ်ရှားပြီး ဘယ်သူ့ကိုတင်ရမယ်ဆိုတာ “နံပတ်ဝမ်း”က တခါထဲ ညွန်ကြားအမိန့်ပေးလိုက်တာပါ။ ပါတီအခင်းအကျင်းထဲက ဖယ်ရှားရတာမို့ ကြံ့ဖွံ့ပါတီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်း [၉၉ (ခ)] ကို ကိုးကားဖော်ပြနေရတာပါ။ ဒီ “အခြေခံစည်းမျဉ်း [၉၉ (ခ) ]” ဆိုတာ အပေါ်ယံပြကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ “အခြေခံစည်းမျဉ်း [၉၉ (ခ) ]” ကို ရဲလုံခြုံရေးက သေနတ်နဲ့ဝန်းရံအားဖြည့်ပေးပါတယ်။ ဒါတွေက အပေါ်ယံပြကွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကတော့ “နံပတ်ဝမ်း” ရဲ့ အမိန့်နဲ့ညွန်ကြားချက်ပါပဲ။ “နံပတ်ဝမ်း” ညွန်ကြားချက်မပါဘဲ သူတို့ချည်းဆိုရင်(ဗိုလ်)ရွှေမန်းကလည်း ဒီလိုငြိမ်ခံနေလိမ့် မယ် မဟုတ်ပါ ဘူး။ “နံပတ်ဝမ်း”ရဲ့ အမိန့်နဲ့ညွန်ကြားချက်မို့သာ (ဗိုလ်) ဦးရွှေမန်း ငုံ့ခံနေရတာ၊ငြိမ်ခံနေရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကို အရာချဖြုတ်ထုတ်ခဲ့စဉ်က “နံပတ်ဝမ်း”ရဲ့ အမိန့်နဲ့ညွန်ကြားချက်ကို အဓိကအကောင်အထည်ဖော်သူဟာ (ဗိုလ်) ဦးရွှေမန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ “နံပတ်ဝမ်း”ရဲ့ အာဏာနဲ့အထာကို (ဗိုလ်) ဦးရွှေမန်းမသိဘဲ မနေပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူ့အလှည့်ကျ ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်း အာခံလွန်ဆန်ဝံ့မယ်လို့လည်း မထင်ပါဘူး။
“၂၀၁၅ မှာ ရာနှုန်းပြည့်အနိုင်ရရမယ်” လို့ ပြောနေတဲ့ အတိုက်အခံပါတီအနေနဲ့ ၂၀၁၅ မှာ ရာနှုန်းပြည့်နိုင်မယ်/မနိုင်ဘူး မသိနိုင်သေးပေမယ့်။ ဗိုလ်ရွှေမန်းကိစ္စကနေတော့ အတွေ့အကြုံနဲ့သင်ခန်းစာ “ရာနှုန်းပြည့်”ရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ စစ်အုပ်စုမှာ “အပျော့အမာလိုင်း/အပျော့အမာဂိုဏ်းရယ်” လို့မရှိပါဘူး၊ “အပျော့/အမာ” ဆိုတာ နံပတ်ဝမ်းရဲ့ စီမံနေရာချထားမှုတွေထဲက ပရိယာယ်ဆင်ကွက်တစ်ခု၊ ထောင်ချောက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ “နံပတ်ဝမ်း” စီမံနေရာထားမှုပေါ်ကနေ သူ့ကောင်တွေရဲ့ အသုံးတော်ခံ မှုတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ တံလျှပ်တွေမျှသာဖြစ်ပါတယ်။ “တံလျှပ်ရေထင် ရွှေသမင် အလိုက်မှားတတ်တယ်” လို့ဆိုတယ် မဟုတ်ပါလား။ “တံလျှပ်နဲ့ရွှေသမင်”ကို “နံပတ်ဝမ်း” ကပဲ စီရင်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ စစ်အုပ်စုဖန်တီးထားတဲ့ အခင်းအကျင်းထဲက ဂိုဏ်းအုပ်စုတစ်ခုကို ယုံစားပြီး “ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတို့ /အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးတို့/ ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ရေးတို့ ” ကို စိတ်ကူးယဉ်လို့ မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ကျနော်တို့ ဒီမိုအတိုက်အခံများ ရရှိလိုက်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုဆက်ပြောချင်တာတော့ ဒီမိုအတိုက်အခံအချို့ပြောနေကြတဲ့ “ဝှက်ဖဲ” ကိစ္စပါ။
“ဝှက်ဖဲ” ဆိုတာကို အာတွေ့ပြီး အဓိကပြောနေကြသူတွေဟာ “ဒီမိုမေမေ” ရဲ့ မလိမ်မိုးမလိမ်မာ သားသည်းချာတွေပဲဖြစ်ပါ တယ်။ “ဝှက်ဖဲ” ဆိုတာ အာဏာရှိသူပဲ ကိုင်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာမဲ့သူမှာ ဘာဝှက်ဖဲမှမရှိပါဘူး။ “ဝှက်ဖဲ” လည်း မကိုင်နိုင်ပါ ဘူး။ ရှိနေတယ်လို့ထင်နေတာ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်မှုသာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စေ့မှိတ် အထင်ကြီးမှုသာဖြစ်ပါတယ်။
“ဒီမိုမေမေ့”ဆီမှာ ဝှက်ဖဲမရှိပါဘူး၊ “လီလီပန်းများ” သာရှိပါတယ်။
လာမယ့် သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပြန်လည်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ကညွတ်ကွင်းသားရဲ့ မျက်နှာထားနဲ့ပြောစကားကို စောင့်မျှော် ကြည့်ရှု နားထောင် အကဲခပ်ကြပါစို့။ ကညွတ်ကွင်းသားအနေနဲ့ “မိမိကိုယ်ကို မိမိလည်း သနား တယ်။ အတိုက်အခံကိုလည်းသနားတယ်” လို့ ထပ်ပြောလေအုံးမလား။
3 Responses to တူမောင်ညို – ကညွတ်ကွင်းသား၏ နောက်ဆုံး နိဂုံးလော
ဇာနီကြီး on August 15, 2015 at 7:33 am
စစ်ဗိုလ်များ စစ်အာဏာသိမ်းဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အလားတူ အတိုက်ခံများ အစိုးရဖွဲ့ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ကတော့ ဦးရွှေမန်း သမ္မတဖြစ်ရေးလိုပဲ အလွန်ခက်ခဲသွားပါတယ်။ အစိုးရကို စိုးမိုးသူကတော့ စစ်တပ်ပဲ ဆိုတာ ပြလိုက်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင် အင်အားသုံးချေမှုန်းတာမျိုး လုပ်မယ်၊ တရုပ်အစိုးရ အမေရိကန်အစိုးရတွေလဲ ဝင်ပြောလို့ မရမဲ့ ။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များလဲ မတတ်နိုင်အခြေနေမျိုးပါပဲ။
ဆောင်းပါးအရတော့ အငြိမ်းစား တပ်ချုပ်ကြီးဦးသန်းရွှေ အာဏာကို ကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်ထားဆဲပါပဲ။
Ba Ba Gyi on August 15, 2015 at 6:23 pm
မြန်မာပြည်ကိုစတင်ဖျက်ဆီးသူက “ဗမာ့တပ်မတော်ရဲ့ဒုတိယဖခင်ကြီး” ဗိုလ်နေဝင်း။
“ဒုတိယဖခင်ကြီး” ဗိုလ်နေဝင်းနဲ့သမီး၊ သမက်၊မြေးတွေကိုဖမ်းချုပ်ပြီး ဇာတ်တူသားစားပြခဲ့တဲ့ တပ်ချုပ်ကြီးက “တတိယဖခင်ကြီး” ဗိုလ်သန်းရွှေ။
“တတိယဖခင်ကြီး”ဘုန်းကြီးနေဆဲဘဲ။ ဘယ်တော့များထပ်ပြီးဇာတ်တူသားစားပြမည့် “စတုတ္ထဖခင်ကြီး”ပေါ်လာဦးမှာလဲ။ မြန်မြန်ပေါ်လာပါစေ။
Dr. Zhivaka(Kambawza) on August 15, 2015 at 11:01 pm
According to Mao’s Thought( Chairman Mao Xi Tong ), POWER comes from the barrel of gun. In Myanmar Political Arena, ” No One “is above me because I am number”ONE”. Apparently on paper & propaganda- No one is above the Law. I am not an ordinary king. I am Universe Ruler( Set kyet wa day Min). I can do as I like before I die. I am so called Buddhist learning Buddha’s Dhamma for NOTHING practically.